ဈေးသင့်တင့်ပြီး မျက်တောင်ထူထူရှည်ရှည်လေးဖြစ်သွားစေမယ့် Drugstore Mascara
ဈေးသင့်တင့်ပြီး မျက်တောင်ထူထူရှည်ရှည်လေးဖြစ်သွားစေမယ့် Drugstore Mascara များ
မျက်တောင်ထူပြီးရှည်တာမျိုးကို လိုချင်တဲ့သူတွေအတွက် မိတ်ကပ်ပြင်တဲ့အခါမှာလည်း perfect ဖြစ်နေစေဖို့ ဈေးသင့်တင့်ပြီး မျက်တောင်ထူထူ ရှည်ရှည်လေး ဖြစ်သွားစေမယ့် Drugstore Mascara တွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Essence ရဲ့ Lash Princess False Lash Effect Mascara ကတော့ မျက်တောင်ရှည်ပြီး ထူသွားစေဖို့အတွက် အရမ်းမိုက်ပြီး ဈေးလည်းအရမ်းတန်တဲ့ Mascara ဖြစ်ပါတယ်။
Maybelline ရဲ့ New York The Falsies Lash Lift Ultra Black Intensifier Mascara ကတော့ Allure Awards ရထားတဲ့ Mascara ဖြစ်ပါတယ်။ ကော့လိုက်တာနဲ့ မျက်တောင်တွေက လုံးဝကိုမဲနက်ပြီး ထူထူရှည်ရှည်လေး ဖြစ်သွားစေပါတယ်။
Revlon ရဲ့ So Fierce! Eyes Wide Open Mascara က မျက်တောင်တွေကို တစ်ပင်ချင်းစီပင့်ပြီး ကော့ပေးရင် ပိုမိုက်ပါတယ်။ မျက်တောင်တွေကော့ပြီး ထူထူရှည်ရှည်လေး ဖြစ်သွားစေလို့ မျက်လုံးပိုကြီးသလို ဖြစ်စေပါတယ်။
Lottie London Super Fake False Lash Effect Mascara က မျက်တောင်တုတပ်ထားသလို look မျိုးရတဲ့အထိ မျက်တောင်တွေထူပြီး ရှည်သွားစေမယ့် Mascara မျိုးလို့ တင်စားထားတဲ့ Mascara ဖြစ်ပါတယ်။
Best Drugstore Products တွေထဲမှာဆိုရင် E.L.F. Cosmetics ကတော့ အမြဲလိုလိုပါတာပါပဲ။ အခုလည်း E.L.F. Cosmetics ရဲ့ Big Mood Mascara က Allure Awards ရထားတဲ့ Mascara ဖြစ်ပါတယ်။ ကော့လိုက်တာနဲ့ မျက်တောင်လေးတွေ ရှည်ပြီး ထူသွားစေတဲ့အပြင် တစ်ချောင်းချင်းစီ အရမ်းလှတဲ့ look မျိုးရစေပါတယ်။
Wet N Wild ရဲ့ Mega Volume Mascara ကတော့ ဈေးအရမ်းတန်ပြီး သုံးလို့လည်းအရမ်းကောင်းတဲ့ Mascara ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်တောင်တွေ မဲနက်ပြီး ထူထူရှည်ရှည်လေး ဖြစ်သွားစေပါတယ်။ မျက်တောင်တွေ ကပ်ကုန်တာမျိုးလည်း မဖြစ်စေပါဘူး။
MyStyle Myanmar2022-05-05T09:13:55+06:30May 6th, 2022|Beauty, မိတ်ကပ် – Make Up, မျက်လုံး – Eyes|